Cap / clsi Type High rano madio I Factory, Suppliers | China Cap / clsi Type High rano madio I Manufacturers
Home » Products » Laboratory Fitaovana » Water fanadiovana Systems » CAP / CLSI Type I ambony rano madio
Smart mandroba / Smart Rob-R (15,30L / h)
Smart mandroba rafitra afaka mamokatra CAP / CLSI Type I reagent rano ho an'ny pitsaboana analyzer.It manome fahafahana sy ny asa mifandray mivantana amin'ny aterineto. Fanaraha-maso tsy miankina ny rano fivoahan'ny boky fampianarana dia azo ampiasaina ho an'ny fanampiny fampiharana.
Smart mandroba / Smart Rob-R (50,100,150L / h)
Pureforce gazela (30,70,100L / h)
Sitrano Force dia lasa modely Pureforce gazela, indrindra fa ny rano sarotra ambony vahaolana amin'ny laboratoara. Fampidirana amin'ny electrodeionization Module, Pureforce gazela hatrany dia afaka manome karazana II voadio rano
Pureforce gazela (150,300,500L / h)
Pureforce gazela mametraka ireo fitsipika ao toetra, famolavolana sy ny fanavaozana avy amin'ny lova ny traikefa nandritra ny taona maro amin'ny foibe fizarana laboratoara rano.
Pureforce gazela avo lenta manome fahana ho an'ny maro rano mandeha ho azy biochemical analyzers niara amin'ny alalan'ny fizarana manome fitoerana